Ezona mpawu ziphambili zeekhonteyina zokupakisha zeglasi zezi: ezingenatyhefu, ezingenancasa; Ukungafihli, okuhle, ukuthintela okuhle, ukungangeni moya, izinto ezityebileyo neziqhelekileyo, ngexabiso eliphantsi, kwaye zinokusetyenziswa ngokuphindaphindiweyo. Inezinto eziluncedo zokumelana nobushushu, ukuxhathisa uxinzelelo kunye nokucoca ukuxhathisa. Inokuba ...
Iibhotile zeglasi kunye nezikhongozeli zisetyenziswa ikakhulu kwimizi-mveliso yotywala nakwisiselo esingesiso isiselo esinxilisayo, esinokugcina inertia yemichiza, ukungabinamandla kunye nokungagqibi. Ixabiso lentengiso leebhotile zeglasi kunye nezikhongozeli kwi-2019 ngama-60.91 ezigidigidi zeedola zaseMelika, ekulindeleke ukuba ifike kwi-77.25 yezigidigidi zase-US ...
Ibhotile yeglasi sisiqulatho sokupakisha sokutya kunye nesiselo kunye neemveliso ezininzi, ezisetyenziswa ngokubanzi. Iglasi ikwaluhlobo lwezinto zokupakisha zembali. Kwimeko yeentlobo ezininzi zezinto zokupakisha ezithela kwimarike, isitya seglasi sisekhona ukungenisa ...
Iimpawu kunye neentlobo zeebhotile zeglasi
Zininzi iintlobo zeebhotile zeglasi, ezivela kwiibhotile ezincinci ezineebhotile zeglasi eziqaqambileyo azipheli. Ngokwenkqubo yokuvelisa, iibhotile zeglasi ngokubanzi zahlulwe zangamacandelo amabini: iibhotile ezibunjiweyo (kusetyenziswa iibhotile zemodeli) kunye neebhotile zolawulo (kusetyenziswa iglasi co ...
Iibhotile zeglasi zisetyenziswa ngokubanzi kwimizi mveliso eyahlukeneyo
Njengezinto ezingaphiliyo ezingaphiliyo, iglasi inentsebenzo ezinzileyo, kwaye igudile kwaye iyabonakala, efanelekileyo ngokukodwa ekupakisheni nasekugcinweni kweziyobisi. Ngexesha elifanayo, xa kuthelekiswa nezinye izinto, ixabiso leglasi lixabiso eliphantsi. Kule minyaka yangoku,...